Layma's World: October 2008
ရွှေမိက ကုတင်အောက်က ... စက္ကူဗူးထဲက .... ထမင်းပေါင်းအိုးအလွတ်ထဲက .... ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပန်းကန်လေးကို ထုတ်လိုက်ပါတယ်…။
Posted by lay-ma at 9:39 PM 11 comments Links to this post
အိမ်ရှေ့မှာ Notice စာရောက်နေတယ်…။ တက်စ်ထားတယ် လမကုန်ခင်ရေးပေးပါ နော့် :P …. တဲ့ …။ ပြောင်ပြသွားလိုက်သေး… မခန့်တာပြောပါတယ်…။ ဘာအကြောင်းရေးရမှာလဲ… သွားကြည့်တော့ နောက်တီးနောက်တောက်နဲ့ဘာ Tag လည်းတော့ မသိပါ .... တဲ့ …။ လူကြီးကို နောက်ပြန်ပြီ …။ သူရေးထားတာ ဖတ်ကြည့်တော့ ကြယ်ပွင့်များနှင့်တွေ့ ဆုံခြင်းလိုလို ဆိုပါလား…။ အဟိ… ဂလို ဆိုတော့လည်း ရေးရပေမပေါ့ ….။ အောက်ဆုံးမှာတော့ “ အပျင်းထူနေတဲ့ အစ်မလေးမ ” ဆိုပါလား……။ ဘယ်လိုလုပ်သိသွားပါလိမ့်နော် …။ လမကုန်ခင် မြန်မြန် ရေးပေးမှ ဖြစ်မယ်…။ တော်ကြာ နာမ၀ိသေသန ဆိုးဆိုးတွေ အတပ်ခံနေရဦးမယ်…။
မေး ..........လေးမ (တဂ်ခံရတဲ့သူ ) နဲ့ မောင်မျိုး (တဂ်တဲ့သူတို့) ဘယ်လိုများ ဆက်ဆံပတ်သက်လည်း မသိဘူးနော်
ဖြေ...........အင်တာနက် ရင်ပြင်ပေါ်မှာ ပြေးပြေးလွှားလွှား သွားသွားလာလာလုပ်ရင်း ခင်မင်ခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတွေပါ ။
မေး..........သူ့အပေါ် လေးမရဲ့ထင်မြင်ချက် ၅ ချက်လောက်ပြောပြပါလား ?
3 ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အချက်က …... သူ့ ရဲ့ အလွဲတွေ ဖြစ်ပါတယ်….။
မေး....အမှတ်တရ အဖြစ်ဆုံး လေးမ အတွက် လုပ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အရာလေးများရှိလား ?
ဖြေ.....မနှစ်က ဇန်န၀ါရီလမှာ မေးလ်နဲ့လက်ဆောင် ပို့ လိုက်တာပါ…။
မေး..... ချစ်သူသာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ဘက်က ဘာတွေ ပြုပြင်ဖို့လိုမယ်ထင်လဲ ?
မေး.........သူက လေးမ ရန်သူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရော ?
ဖြေ......... သူ့ ဘလော့ဂ် မလည်ဘူးပေါ့…။( ဘလော့ဂ် မလည်တိုင်းတော့ ရန်သူ မဟုတ်ဘူးနော်. အတွေး မမှားနဲ့နော်)
ဖြေ.... ရန်စလာရင် ရန်သူဖြစ်သွားမယ် …။
မေး.... သူ့အတွက် လေးမ ဆန္ဒအရှိဆုံး လုပ်ပေးချင်တာလေးများရှိလား ?
ဖြေ.... လောလောဆယ် သူရေးခိုင်းတာ ရေးပေးတယ်…။
မေး..... ( တကယ်ကို ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ ) လေးမအပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုရော ဘယ်လိုမြင်လဲ ?
ဖြေ....အကောင်းပြောရင် ကျေနပ်စရာလို့မြင်ပြီး … မကောင်းပြောရင် ရယ်စရာလို့မြင်ပါတယ်…။
ဖြေ.....လွတ်လွတ်လပ်လပ် မရေးရဲတဲ့ အကျင့် ….။
ဖြေ....စိတ်ရော လူရော ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရှိတဲ့ လူစားမျိုး ။
မေးးး ... ချစ်ခင်ဂရုစိုက်တဲ့လူတွေကို ဘာများပြောချင်ပါလဲ ?
ဖြေ... နှလုံးသားအာဟာရ ဒါနပြုကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ...။
P.S. နောက်.. ဂျောက်ချရမယ့်သူ စဉ်းစားဆဲ…နော်…. အာရုံရရင် ဂျောက်ချမယ်…။ ဟော စဉ်းစားမိပါပြီ.. မီ... ပါ.. ရွှန်းမီ... ပါ... စုံစီနဖာ စာမျက်နှာက ရွှန်းမီ ကို ဂျောက်ချပါတယ်...။
Posted by lay-ma at 1:21 AM 11 comments Links to this post
အချစ်ဟာ မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်လာတတ်သလို … မသင်ယူဘဲ တတ်မြောက်ခဲ့ကြတဲ့ အရာပါပဲ…။ ဒါပေမယ့် ချစ်တတ်အောင်တော့ သင်ယူခဲ့ကြရပါတယ်…။ မသိမသာတစ်မျိုး… သိသိသာသာ တစ်မျိုးနဲ့ချစ်တတ်အောင် သင်ယူခဲ့ကြပါတယ် …။ အချစ်ခံရခြင်း အားဖြင့်လည်း သင်ယူခဲ့ကြသလို .... အချစ်ပေးခြင်း အားဖြင့်လည်း သင်ယူခဲ့ကြရပါတယ်…။ ချစ်တတ်အောင် မသင်ယူခဲ့ဘဲ အချစ်ကို လက်တည့် စမ်းရင်တော့ အမုန်းနဲ့မျက်ရည်တွေသာ များများရပါလိမ့်မည်…။
Posted by lay-ma at 11:30 PM 21 comments Links to this post
လေးမတို့ငယ်ငယ်က အော်တိုစာအုပ်လေးတွေမှာ အမှတ်တရရေးခိုင်းတဲ့ အတွေ့ အကြုံလေးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်…။ နောက်ပိုင်းတော့ “ရေးပေးပါ” စာအုပ်လေးပေါ်လာပြီး ရေးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်….။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလေးနက်တဲ့ ခံယူချက်မျိုးမရှိခဲ့ဘဲ ပေါ့ပေါ့တန်တန် ပေါ်ပင် သဘောမျိုးပဲ ရေးခဲ့… ရေးခိုင်းခဲ့မိပါတယ်…။ ဒါကြောင့် အထက်တန်းတုန်းက အော်တိုစာအုပ်... လေးမမှာ မရှိတော့ပါဘူး…။ တက္ကသိုလ်တုန်းက စာအုပ်လေးတွေတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာ ကျန်နေသေးလို့ scan ဖတ်ပြီး A Story in MTU မှာ တင်ထားပါတယ်.. ( လောလောဆယ်တော့ ပုံတွေ ပျောက်နေတယ်.. ဟီး..ဟီး.. အချိန်များများရတဲ့တစ်နေ့ မှ ဘလော့ဂ်က ပုံတွေကို ပြန်တင်ရဦးမယ်) ။
ဒီိလိုရေးလို့လေးမ ကွန်မန့် တွေ ရေးခိုင်းနေတာလားလို့မေးရင် ဟုတ်ပါတယ် … လို့ ပဲ ဖြေရပါမယ်…။ လေးမ ကွန်မန့် တွေကို ချစ်ပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် အရာရာတိုင်းမှာ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးဆိုတာ ရှိပါတယ်…။ ၀တ်ကျေ တန်းကျေ ( ကိုပီကေ ရေးသလို ... အထာနဲ့ ပေါ့ ) ကွန်မန့် တွေကတော့ ဘလော့ဂ်ရေးသူကို စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်စေပါတယ်…. ။ ကံကောင်းတာကတော့ အဲလို ကွန်မန့် မျိုး လေးမ မရသေးဘူး… မရေးသေးဘူး …. ထင်ပါတယ် ( ရှိတော့ ရှိမယ်… နည်းနည်းလေးပါပဲ) …။
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရင်ဘတ်နဲ့ရေးထားတဲ့ ပို့ စ်တစ်ပုဒ်အတွက် … ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုက်ညီပြီး ... နှစ်သက်လို့…. ကွန်မန့်ရေးဖို့ လည်း လွယ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ …. အပန်းလည်းမကြီးဘူးဆိုရင် …… ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲက စကားတွေ ချရေးပေးခဲ့တာ ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်အတွက်တော့ နှလုံးသား အာဟာရတစ်ခုပါပဲ ….။ ။
Posted by lay-ma at 9:48 PM 18 comments Links to this post
Labels: That's what I wanna say, Thinkings from story
Posted by lay-ma at 3:08 AM 23 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 1:39 AM 11 comments Links to this post